အရသာရှိတဲ့ Spaghettiကို အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားကြမယ်… – Trend.com.mm
အရသာရှိတဲ့ Spaghettiကို အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားကြမယ်…
Posted on May 24, 2018 by Wint
Spaghetti ဆိုတာ အီတလီလူမျိုးတွေကနေ စတင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ရိုးရာစားသောက်ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Pasta လိုပဲ Spaghetti ကိုလည်း ဂျုံနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ ဂျုံတွေဟာ ကောင်းလွန်းလို့ ဗီတာမင်ဓာတ်တောင်ပြည့်ဝစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူ့ကို ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် ၊ အသားတွေ (သို့) အသီးရွက်တွေနဲ့ရောပြီး စားသုံးကြပါတယ်။
ရုပ်ရှင်တွေ တော်တော်များများမှာလည်း Spaghetti လုပ်စားကြတာတွေမြင်ဖူးမှာပါ။ သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကလည်း စားချင်စဖွယ်လေးနော်။ အပြင်မှာစားဖူးတယ်… ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာလည်း လုပ်စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူများအတွက် လွယ်ကူစေမယ့် Spaghetti လုပ်နည်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ နည်းလမ်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အသီးရွက်တွေ ထည့်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ Spaghetti မှာတော့ အဓိကပြင်ဆင်ရမှာက Sauce တစ်ခုပါပဲ။
ကဲ ဒါဆို Sauce လုပ်ဖို့အတွက် ဘာအတွက် လိုအပ်မလဲ ?
Sauce လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်မယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ –
– သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၂)ဇွန်း
– ကြက်သွန်နီအသေး ၂လုံး
– ကြက်သွန်မြိတ် ၂
– ကြက်သွန်ဖြူ ၂
– ခရမ်းချဉ်သီး ၂၈အောင်စ
– ပူစီနံအခြောက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ဇွန်း
– ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင် ၄ဇွန်း
– သကြားဖြူ တစ်ဇွန်း
နောက်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသားတစ်မျိုးကိုလည်း ထည့်လိုရပါတယ်။
အိုးပူပြီဆို ဆီကိုအရင်ဆုံးထည့်မယ်။ ပြီးရင် ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်မြိတ် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ကိုထည့်ပြီး မွှေမယ်။
မွှေပြီးရင် အခွံနွှာထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို ထည့်ပါမယ်။ သကြား ၊ ပူစီနံခြောက် ၊
ဟင်းခတ် အမွှေးကြိုင်တို့ကို ထည့်ပြီး ထပ်မွှေလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်ကို ထည့်၊ ဆားဖြူး ၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာအသားကိုထည့်ပြီး ချက်ပါ။ အသားလည်းနူးပြီ အရသာလည်း အသင့်တင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ခေါက်ဆွဲနဲ့ sauce ကိုရောမွှေပြီး သုံးဆောင်ရုံပါပဲ။
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ အနံ့မွှေးမွှေး အရသာရှိတဲ့ Spaghetti တစ်ပွဲရပါပြီ။ ဘာမှမခက်ပါဘူး။ အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိသားစုဝင်တွေကိုဖြစ်ဖြစ် ချက်ကျွေးချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးက သင့်ရဲ့လက်တစ်ကမ်းအလိုမှာရှိနေပါတယ်။ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ဆက်လက်မျှဝေပေးသွားပါဦးမယ်….
အရသာရှိတဲ့ Spaghettiကို အိမျမှာ ကိုယျတိုငျ လုပျစားကွမယျ…
Spaghetti ဆိုတာ အီတလီလူမြိုးတှကေနေ စတငျဖနျတီးလိုကျတဲ့ ရိုးရာစားသောကျဖှယျတဈခုဖွဈပါတယျ။ Pasta လိုပါပဲ Spaghetti ကိုလညျး ဂြုံနဲ့ပွုလုပျထားတာဖွဈပွီး
တဈခြို့ ဂြုံတှဟော ကောငျးလှနျးလို့ ဗီတာမငျဓာတျတောငျပွညျ့ဝစတေယျလို့သိရပါတယျ။ သူ့ကို ခရမျးခဉျြသီးဆော့ဈ ၊ အသားတှေ (သို့) အသီးရှကျတှနေဲ့ရောပွီး စားသုံးကွပါတယျ။
ရုပျရှငျတှေ တျောတျောမြားမြားမှာလညျး Spaghetti လုပျစားကွတာတှမွေငျဖူးမှာပါ။ သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကလညျး စားခငျြစဖှယျလေးနျော။ အပွငျမှာစားဖူးတယျ… ဒါပမေယျ့
ကိုယျတိုငျအိမျမှာလညျး လုပျစားခငျြတယျဆိုရငျတော့ စာဖတျသူမြားအတှကျ လှယျကူစမေယျ့ Spaghetti လုပျနညျးကိုပွောပွပေးသှားပါမယျ။
Spaghetti မှာတော့ အဓိကပွငျဆငျရမှာက Sauce တဈခုပါပဲ။ ကဲ ဒါဆို Sauce လုပျဖို့အတှကျ ဘာအတှကျ လိုအပျမလဲ ?
Sauce လုပျဖို့အတှကျ လိုအပျမယျ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့ –
– သံလှငျဆီ လကျဖကျရညျဇှနျး (၂)ဇှနျး
– ကွကျသှနျနီအသေး ၂လုံး
– ကွကျသှနျမွိတျ ၂
– ကွကျသှနျဖွူ ၂
– ခရမျးခဉျြသီး ၂၈အောငျစ
– ပူစီနံအခွောကျ လကျဖကျရညျဇှနျး ၄ဇှနျး
– ဟငျးခတျအမှေးကွိုငျ ၄ဇှနျး
– သကွားဖွူ တဈဇှနျး
နောကျပွီး ကိုယျကွိုကျနှဈသကျရာ အသားတဈမြိုးကိုလညျး ထညျ့လိုရပါတယျ။
အိုးပူပွီဆို ဆီကိုအရငျဆုံးထညျ့မယျ။ ပွီးရငျ ကွကျသှနျနီ ၊ ကွကျသှနျမွိတျ ၊ ကွကျသှနျဖွူ ကိုထညျ့ပွီး မှမေယျ။
မှပွေီးရငျ အခှံနှာထားတဲ့ ခရမျးခဉျြသီးတှကေို ထညျ့ပါမယျ။ သကွား ၊ ပူစီနံခွောကျ ၊ ဟငျးခတျ အမှေးကွိုငျတို့ကို ထညျ့ပွီး ထပျမှလေိုကျပါ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ ခရမျးခဉျြသီးအနှဈကို ထညျ့၊ ဆားဖွူး ၊ ကွိုကျနှဈသကျရာအသားကိုထညျ့ပွီး ခကျြပါ။
ကဲ ဒါဆိုရငျတော့ အနံ့မှေးမှေး အရသာရှိတဲ့ Spaghetti တဈပှဲရပါပွီ။ လိုအပျတဲ့အရသာလေးတှတေော့ ကိုယျ့ဘာသာမွညျးရငျးထညျ့ဖွညျ့ပေါ့။ ဘာမှမခကျပါဘူး။
အိမျမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့စုပွီးပဲဖွဈဖွဈ ၊ မိသားစုဝငျတှကေိုဖွဈဖွဈ ခကျြကြှေးခငျြတယျဆိုရငျ ဒီနညျးလမျးလေးက သငျ့ရဲ့လကျတဈကမျးအလိုမှာရှိနပေါတယျ။
အရသာရှိတဲ့ ဟငျးခကျြနညျးလေးတှေ ဆကျလကျမြှဝပေေးသှားပါဦးမယျ….
” Game Of Thrones” မှာ Daenerys ရဲ့ဇာတ်သိမ်းမကောင်းမှုကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ Emilia Clarke